I-Ultrasonic Powder Compacting - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher Ultrasonics yenza amadivayisi we-ultrasonic agitation of containers, izikhumba, reactors noma amakholomu. Izidakamizwa ze-ultrasonic zingagubha izinhlayiya ze-powder ngemuva kokugcwalisa, ukuze zithole i-powder packing kanye ne-uniform powding packing.
Ubuningi bomthamo noma ukupakisha kwama-powders namadivayisi amaningi kunethonya elibalulekile ekukhuphukeni, ukuvota nokuvota ivolumu. Ngemuva kokugcwalisa i-powder eyomile noma emanzi noma i-powder slurry emgodini, ingxenye ngayinye ye-powder ayiyona indawo ephelele kuma-particle angomakhelwane ohlelweni lokupakisha.
Njengokubetha isitsha ngenani elithile lezinye izikhathi (isib. Izikhathi eziyi-100), ukuduma kwe-ultrasonic kudlulisa ukushaqeka kwamashini (amathinta) kwisitsha kuze kube izikhathi ezingu-26,000 ngomzuzwana. Ukusebenzisa idivayisi yama-ultrasonic yama-Hielscher ene-amplitude njalo iqinisekisa ukuthi ibhathini ngalinye lilawulwa ngokugcwele futhi liphindaphinda ngokulingana nokuvama. Lokhu kuholela ekwenzeni izinga elihle ekuhlaziyeni noma ekukhiqizeni. Isicelo esivamile ukuhlanganiswa kwamakholomu we-HPLC ngesikhathi noma emva kokugcwalisa. Kulesi simo, ikholomu ngokwalo ivulekele ukudlidliza kwe-ultrasonic.
Ukuhlanganiswa kwe-Powder kungenziwa kalula nangendlela efanelekile nge-Hielscher VialTweeter. I-Ultrasonic vibration ixazulula izinhlayiya ezinamandla ngemizuzwana.
I-Ultrasonic Compacting isebenzisa iHielscher VialTweeter
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuhlanganiswa kwe-ultrasonic. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Ngokujwayelekile, isilinganiso esincane sezinhlayiya ezinamaqabunga ukuze ama-particle amahle afinyelele kubuningi bokupakisha noma isibalo esincane esiphansi. Ubuningi bombhalo buchaza, ukuthi izinto zizohlala kanjani noma zihlanganiswe ngaphansi kwengcindezi. Kuncike kokubili kwe-powder particle mass kanye nokuhlelwa kwendawo yezinhlayiya embhede wempuphu.